Wafdi ka socda Somaliland, Puntland iyo Galmudug oo gaaray Nairobi | raascasayrmedia.com
← Shariif Iyo Farmaajo oo u duulay Kenya
Maxamed Dheere: Faroole Waa dhaqaale Doon →
May 24, 2011 · 7:56 pm
Wafdi ka socda Somaliland, Puntland iyo Galmudug oo gaaray Nairobi
Madaxweynayaasha Maamulada Galmudug iyo Puntland Max’ed Axmed Caalin, C/raxmaan Sheekh Max’uud Faroole iyo wasiiro ka tirsan Somaliland ayaa maanta gaaray Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta barqadii waxaa ay ka dhoofeen magaalada Garoowe ee xarunta Puntland iyagoo u dhaqaaqay dhinaca Nairobi halkaasi oo maalinta beri ah kaga qeyb gali doonaan shirka Qaramada Midoobay.
Sidoo kale Madaxweynaha Maamulka Galmudug Max’ed Axmed Caalin ayaa ka kicitimay garoonka diyaaradaha ee Magaalada Gaalkacyo waxaana la xusay in uu isan gaaray magaalada Nairobi.
Labadaani madaxweyne ayaa kala matalaya maamulada Galmudug iyo Puntland oo lagu xasuumay shirka golaha amaanka ee qaramada Midoobay ay ku yeelaneyso magaalada Nairobi kaasi oo looga hadlayo xaalada Soomaaliya iyo qaabkii looga gudbi lahaa khilaafka hareeyay madaxda dowaladda KMG Soomaaliya.
Dhinaca kale shirkaani maalinta beri ah ka furmaya magaalada Nairobi oo ay ka qeyb galayaan dowladda KMG iyo Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waxaa bar bar socday kulan kale oo gaar ah kaasi oo Kenya ay ku yeelanayaan masuuliyiin ka tirsan qaramada Midoobay iyo Somaliland.
Wafdi heer wasiiro ah oo ka socda Somaliland islamarkaana uu hogaaminayo Wasiirka arimaha dibada Somaliland Max’ed Cabdullaahi Cumar ayaa gaaray Nairobi iyadoo ay kala hadli doonaan masuuliyiinta qaramada Midoobay sidii aqoonsi loogu fidin lahaa Somaliland.
Wasiirka arimaha dibada Somaliland Max’ed Cabdullaahi Cumar oo Idaacada BBC-da la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in shirka dhexmaraya Somaliland iyo QM uu ka madaxbanaanyahay shirka Masuuliyiinta Somalida ay ka qeyb galayaan, isagoo carabka ku dhuftay in ay waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay kala hadlayaan ay tahay madaxbanaanida Somaliland.